Madaxweynaha kooxda Bayern Munich Uli Hoeneß oo talo muhiim ah u diray kooxda PSG – Gool FM
Madaxweynaha kooxda Bayern Munich Uli Hoeneß oo talo muhiim ah u diray kooxda PSG
Dajiye September 3, 2018
(Bayern) 03 Sab 2018. Madaxweynaha kooxda Bayern Munich Uli Hoeneß ayaa kula taliyay maamulka PSG inay raadsadaan agaasimo ciyaareed ee cusub ee badal u noqda kan haatan ay heystaan ee Antero Henrique.
Kooxda PSG ayaa waxay xiliyadii lasoo dhaafay ay raacdo u gashay sida ay ku heli lahayd saxiixa Jérôme Boateng, laakiin ugu dambeyn waxay ku guuldareesteen heshiiskan, kadib marka uu soo xirmay suuqa xagaaga.
Uli Hoeneß oo arintan ka hadlay ayaa wuxuu yiri “Waxaan kula talin lahaa PSG inay bedesho agaasimaheeda ciyaaraha, sababtoo ah ma ahan mid wanaajinaya kooxda”.
“PSG ma lahaan karto agaasimo ciyaareed ee noocan oo kale ah, hadii ay doonayaan inay ka mid noqdaan kooxaha ugu fiican aduunka”.
Ronaldo JR oo sameeyay wax uu awoodi waayay inuu sameeyo Aabihiis Cristiano!!
Mido oo ka hadlay in Salah uu ka mid noqday magacyada saddexda xidig ku tartami doont abaal marinta FIFA The Best